ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်
ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်
Posted by may flowers on May 6, 2012 in Copy/Paste |9comments
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ကျန်းမာရေးကြောင့် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားပြီပာု Reuters သတင်းဌာန၏ သတင်းအရ သိရှိရသည်။စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှ ဆေးကုသခံယူပြီးအပြန် ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရာထူးမှ အနားယူလို ကြောင်း မေလ ( ၃ ) ရက်နေ့ကထဲက..သက်ဆိုင်ရာသို့တင်ထားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
Myanmar’s Vice President Tin Aung Myint Oo sprinkles fragrant water ataplaque during the opening ceremony ofachildren’s hospital in Yangon March 13, 2011.Credit: Reuters/Soe Zeya Tun
YANGON (Reuters) – A former top general close to Myanmar’s retired dictator Than Shwe has resigned as vice-president, Burmese media reported, ending the hardliner’s role in the reformist government.
Tin Aung Myint Oo graduated from the Defense Services Academy in 1970, becoming northeastern military commander near the Chinese border late 1990s.
မှက်ချက်။ ။သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
သီချင်းပါ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ဆိုကြည့်တာပါ
ကျွန်တော်က တခါတလေ စိတ်ဖေါက်တတ်တယ်။ဒါပါပဲ သွပ် သွပ်….။
ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဗျာ…
ဝမ်းနည်းရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလား မိသိန်းကြည် .. လို ဖြစ်နေသလားလို့….။
အင်း တပ်ချုပ်ကြီးလမ်းစဉ်လိုက်ကုန်ကြပြီထင်ပါ့။ စောစောနားတော့ ပျက်ပြီးသားနာမည်အဖတ်ဆည်လို့ရ တာပေါ့။ လူလိမ်မာတွေပေါ့။ လူမိုက် အောင်သောင်း အောင်သိန်းလင်းတို့ကတော့ သေတဲ့အထိ နာမည် ပျက်ကိုယူသွားမှာ။
ကျေးဇူးတော့ နည်းနည်း တင်တယ် ။
ခင်တော့ မခင်သေးဘူး ။
အမှန် အတိုင်းပြောရရင် သစ်ထူးလွင် Site ကို ခွေး မပြောနဲ့ကျုပ်တောင်သိတယ် ။
ဆိုတော့ အားလုံးလဲ ဖတ်တယ် …..ခင်ဗျားလည်း ဖတ်တယ်…..ကျုပ်လည်း ဖတ်တယ် ။
အားလုံးနီးပါး ဖတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီရွာထဲမှာ ကူးတင်တာဟာ
ကျုပ် အမြင်မှာတော့ “..လူညွန့် ခူးစား…” တဲ့ သဘောမျိုးမြင်တယ် ။
ဘူးညွန့် မကြိုက်ရင်တောင်မှ “…လူညွန့် …” တော့ ခူး မစားစေချင်ဘူး ။
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် အကိုနီဂိမိရေ ကျွန်တော်လည်းပြောချင်နေတာကြာဘီ
ဖဲ့ခံရမှာကြောက်လို. မန်းလေးဂေဇတ်က ဒုတိယသစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်တောင်များဖြစ်နေလားလို.
ကြာပေါ့ ကြာပေါ့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကြာဘီ။သဂျီးတင်ထားတဲ့စည်းကမ်း
အခြားမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ။
I am just asking it is true or not. ဒီဆိုက်ဒ် မှာက ဗဟုသုတ အဆက်အသွယ်များတဲ့သူတွေများတယ်ဆိုတော့ အမှန်လားအမှားလာသိရအောင်လို့။ နောက်ပြီးသစ်လွင်ထူး မှာဖတ်မှမဟုတ်ပါဘူး Reuters မှာ သတင်းပါနေတာပဲ။ မောင်ရင်သူများကိုအပြစ်တင်မယ်ဆို ရေးထားတာကိုအရင်သေချာ ဖတ်စေချင်တယ်။ ကျုပ်post အသစ်တင်တာလဲမဟုတ်ဘူး။ အားအား ယားယား နေကောင်းလာ၊ ဒါလေးဖတ်လို့ကောင်းတယ်comment ပေးတာလဲမဟုတ်ဘူး ။ဗဟုသုတ အဆက်အသွယ်များတဲ့သူတွေ ဆီက သတင်းမှန် ကိုသိချင်ယုံပဲ။
အဲဒါဆိုတစ်ခုခုစားလိုက်လေ ဘိုးတော်ရဲ့ ကြောင်တောင်တောင်နဲ.ဘာတွေလာပြောနေတာတုန်း????